पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ बोलको गित YouTube बाट हट्यो, के भन्छन् पशुपति ? - Nepal Insider
पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ बोलको गित YouTube बाट हट्यो, के भन्छन् पशुपति ?
काठमाडौं : गायक पशुपति शर्माको नयाँ गीत ‘लुट्न सके लुट् कान्छा…’ सार्वजनिक भए संगै बाट हटाएको छ। शर्माको युट्युब च्यानलमा शुक्रबार सार्वजनिक भएको गीतको भिडियो नेपालको युबट्युब ट्रेन्डिङमा शनिबार दिउँसोसम्म १३ मा थियो।
Previous काठमाडौंमा शक्तिशाली भूकम्पको झड्का महसुस
Next योगेश भट्टराई भन्छन्– भीआईपीको उडानमा आचारसंहिता बनाऔं